Momba anay - Shijiazhuang Forever Bright Trading Co., Ltd.
Shijiazhuang Forever Bright Trading Co., LTD dia mpamatsy matihanina sy mahomby amin'ny karazana vokatra tsy misy rano mihoatra ny 10 taona. Ny orinasanay dia miasa amin'ny famokarana, fivarotana ary famatsiana karazana palitao rehetra. Azontsika atao ny manome ny palitao an-dehilahy, ny akanjon'akanjo, ny akanjo fanaovan-jaza, ny akanjo palitao, ny akanjom-baravarankely, ny akanjo lava PVC, ny fitafiana EVA, ny PE Rain Poncho, ny aprona, ny akanjo fiarovana sns. . Ny vokatra lavorary dia avy amin'ny ekipa mahomby, ny rafitra fitantanana tanteraka ary ny toe-tsaina tsara kalitao. Ny vokatray dia eken'ny besinimaro sy atokisan'ny mpampiasa ary afaka mamaly ny filàna ara-toekarena sy sosialy miova tsy tapaka. Ireo mpanjifanay voalohany dia mbola miara-miasa aminay! Manolotra serivisy tsara indrindra izahay ary mifehy tsara ny kalitao! Miara-maniry miaraka aminao izahay! Ny fivarotana varotra isan-taona dia mitentina USD2000.000, ny tsenanay lehibe dia misy an'i Eropa, Amerika avaratra sy atsimo, afrika ary azia ...
Afa-tsy ny orinasan'akanjo matihanina matihanina, dia mbola manana trano fanontam-pirintinay manokana izahay. Ny trano fanontam-pirintinay dia ao amin'ny tanànan'i Shijiazhuang, faritanin'i Hebei. Manana milina famehezana hafanana maherin'ny 50sets isika, andalana fanontana 10 harato ary milina fanontana hafanana 8sets. Izahay dia za-draharaha amin'ny fanontana, afaka manonta karazana fitaovana toy ny Polyester, nylon, PVC, EVA, PE, PU, ​​TPU sns isika dia afaka manonta karazana famolavolana fanontam-pirinty ao anatin'izany ny fanontam-pirinty, ny fanontana CMYK, ny fanontana ny hafanana, ny REFLECTIVE fanontana, fanovana fanontana loko sy fanontana 3D.
Izahay dia manome lanja ny vintana tsara hananganana fifandraisana amin'ny mpanjifa amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Amin'izany dia manao ny tsara indrindra vitantsika isika amin'ny alàlan'ny fahavononantsika sy ny tanjantsika amin'ny finiavana. Ny tanjonay dia ny fiarovana, avo lenta ary kalitao ambony. Tongasoa eto amintsika hifandray aminay amin'ny raharaham-barotra ho avy, hanome valisoa ho anao izahay amin'ny serivisy tsara indrindra sy ny vokatra avo lenta.
Akanjo Peva, Pvc Poncho, Vehivavy palitao orana, Pvc Raincoat, Ankizy Pu Raincoat, Pu Raincoat,